James Swan oo ku baaqay in doorashada lagu qabto 60-ka cisho ee lagu heshiiyay | Dhacdo
Home Wararka Maanta James Swan oo ku baaqay in doorashada lagu qabto 60-ka cisho ee...
James Swan oo ku baaqay in doorashada lagu qabto 60-ka cisho ee lagu heshiiyay
Wakiilka Qaramada Midoobey ee Somaliya, Amb. James Swan ayaa sheegay inay muhiim tahay in doorashooyinka dalka lagu qabto waqtigii loogu talagalay, isla-markaana aanu jirin wax dib u dhac ah.
“Heshiis ayaa laga gaaray arrimaha doorashada 27-kii May, waxaana xilligaa leesku waafaqay in doorashada Somaliya ay ku dhacdo muddo lixdan maalmood gudahood ah.” Ayuu yiri Wakiilka.
Isagoo la hadlayay Wakaaladda Wararka Turkiga ee Anadolu ayuu sheegay inay lagama maarmaan tahay in hannaanka doorashada dalka lagu soo dhameystiro waqtigii lagu ballamay, isagoona yiri “Tani waa daqiiqad muhiim u ah Somaliya.”
Dhanka kale James Swan ayaa ammaanay dadaalada uu garwadeenka ka yahay Ra’iisal Wasaare Maxamed Xuseen Rooble ee la xiriira arrimaha doorashooyinka ee dalka.
“Aad ayaan ugu qanacsanahay lixdii isbuuc ee la soo dhaafay oo Ra’iisal Wasaaruhu hoggaamiyay wadahadalo dhab ah, isla-markaana uu la yeeshay Madaxda Dowlad Goboleedyada, waana kan horseeday heshiiskii 27-kii May.” Ayuu yiri Swan.
Swan oo Magaalada Antalya ee dalka Turkiga kaga qaybgalay Madasha Diblomaasiyadda ee Antalya Diplomacy Forum ayaa sheegay in saaxiibada caalamka ay daneynayaan arrimaha Somaliya, isagoo intaa ku daray in Turkigu safka hore kaga jiro taageerada Somaliya.
Wareysigiisan ayuu ku sheegay inay weli jiraan caqabado dhanka amniga ah oo ka imaanaya jooggitaanka Shabaab ee dalka, taasoo ay dheer tahay arrimaha bani’aadanimo ee dalka ka jira.
Hadalka James Swan ayaa imaanaya, xilli aanay muuqan suurtagalnimada in muddada harsan ee bisha ah lagu qaban karo doorashada dalka.
Ra’iisal Wasaare Rooble, Madaxda Dowlad Goboleedyada iyo Gudoomiyaha Gobolka Banaadir ayaa Sabtida shir ku leh Magaalada Muqdisho, si dib loogu eeggo wixii ka qabsoomay heshiiskii 27-kii bishii hore ee May.
Previous articleMadaxda Maamul Goboleedyada oo ku wajahan Muqdisho
Next articleMadaxweyne Lafta-gareen oo soo gaaray Magaalada Muqdisho (SAWIRRO)